★မြန်မာ့အလင်း★: US ready for ‘conventional’ war with N. Korea
ဒီမိုမီဒီယာတွေပေါ်မှာတော့ အနောက်ဖက်အစိုးရတွေ လုပ်နေတာလူ့အခွင့်ရေးနဲ့ လူသားတွေ အတွက်ချည်းပဲ ဖြစ်တယ်။ အင်မတန်ကို စိတ်ထားမြင့်မြတ်တဲ့ သူတော်ကောင်းကြီးတွေပေါ့။ ဒါပေမယ့် ကမ္ဘာ့စစ်ပွဲတိုင်းမှာ အနောက်ဖက်အစိုးရတွေ မပတ်သက်တာ ရှိပါသလား? မြောက်ကိုရီးယား nuclear နည်းပညာ ရအောင် အမေ၇ိကန်ကပဲ ကူညီခဲ့ပါတယ်။ (ပါကစ္စတန်လဲ အမေရိကန်ကပဲ ကူညီခဲ့တာပဲ) လိုအပ်တဲ့စက်ကစ္စည်းတွေရောင်းခဲ့ပါတယ်။ အခုတော့ မြောက်ကိုရီးယားက ကမ္ဘာကို အန္တာရယ်ပြုမှာ စိုး၇ိမ်လို့ အမေရိကန် စစ်တပ်ကို အဆင်သင့်ပြင်ဆင်နေရပြီလို့ ပြောလာပြီ။ သြော်. .. ကမ္ဘာကြီးငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် သူတို့ခမျာ မလုပ်ချင်ပဲ လုပ်နေရတယ်ဆိုတဲ့ ဒီမိုမီဒီယာ တွေရဲ့ propaganda တွေကို ယုံကြည်ဆဲမဟုတ်ပါလား။ ခက်တယ်.. မရင့်ကျက်တဲ့ စိတ်ဓါတွေနဲ့ မြန်မာပြည်ကို ဘယ်လိုပြန်လည်ထူထောင်မှာလဲ။ ရိုးသားစွာ ဖြေကြည့်ပါ